एक ह्याक गरिएको इन्स्टाग्राम खाता कसरी पुन: प्राप्ति गर्ने 🥇
चोरीको सुरूको समयदेखि नै अवस्थित छ। पुस्ताको पुस्ता को लागि, यो बेईमान मानिसहरू को साथ देखा परेको छ खराब अभिप्राय वा फुर्सतको दुष्टताबाट पनि। जसले आफूलाई चोरीको लागि समर्पण गरेका छन्। आजकल, त्यहाँ धेरै प्रकारका चोरीहरू छन् वा यहाँसम्म कि आक्रमकता र दुरुपयोग। वर्तमानमा, सामाजिक नेटवर्कहरूको उदयलाई दिएर, त्यहाँ धेरै प्रयोगकर्ताहरू छन् जसको सामाजिक नेटवर्कमा खाता छ। त्यसैले ह्याकर्सको संख्या बढेको छ समानुपातिक रूपमा। नतिजाको रूपमा, प्रयोगकर्ताहरूलाई कसरी ह्याक गरिएको इन्स्टाग्राम खाता पुन: प्राप्ति गर्ने निर्देशन दिन आवश्यक छ।
इन्स्टाग्राम, यस पलको सामाजिक नेटवर्क, एक विशाल तरिकामा प्रयोगकर्ताहरूको लागि आकर्षणको स्तरमा पुगेको छ। देखि, को राशि निजी जानकारी यसमा फेला परेको कुरा अकल्पनीय छ। केहि प्रोफाइल भित्र, यो सम्भव हुनेछ निजी डेटा जुन अन्य व्यक्तिले नदेखेको छ, सम्झौता वार्तालापहरू र बैंक विवरणहरू पनि। त्यसकारण, महान इन्स्टाग्राम नेटवर्कले ख्याल राख्यो सुरक्षाको स्तर बढाउनुहोस्। यद्यपि त्यहाँ धेरै केसहरू छन् जसमा ह्याकरहरूले केही अन्य प्रयोगकर्ताको खाता कब्जा गर्न मद्दत गर्छन्।
तपाईलाई पनि चासो लाग्न सक्छ अर्को इन्स्टाग्राम खाताबाट कसरी एउटा कहानी साझा गर्ने.
कसरी एक इन्स्टाग्राम खाता ह्याकिcking रोक्न?
पहिचान चोरी प्रक्रिया सबै प्रयोगकर्ताहरू द्वारा प्रदान गरिनु पर्छ। त्यहाँ धेरै व्यक्ति छन् जसले यस कटु मार्गबाट ​​यात्रा गरेका छन्। यसको लागि, यो प्लेटफर्म अनुयायीहरूलाई निश्चित लिनको लागि आवश्यक हुनेछ रोकथाम उपायहरू यो, कुनै पनि अज्ञात वा अनावश्यक व्यक्तिलाई गैर-आफ्नो खातामा पहुँच गर्नबाट रोक्नको लागि। यी पूर्वानुमान उपाय एक ग्यारेन्टी छैन पूर्ण सुरक्षा, तर यदि ती इन्स्टाग्राम प्लेटफर्ममा प्रयोगकर्ता सुरक्षा मा वृद्धि सुनिश्चित। यस मार्गको लागि, ह्याक गरिएको इन्स्टाग्राम खाता पुन: प्राप्ति गर्न रिसोर्ट गर्नु पर्दैन।
पहिलो डिफेन्स बाधा जुन प्रयोगकर्ताले राख्नै पर्छ पहिचान प्रमाणिकरण। यो गर्नका लागि तपाईले दुई-चरण कन्फिगरेसन स्थापना गर्नुपर्नेछ। पहिचानको भरपर्दो पुष्टि सीमित नगर्न क्रममा। यस प्रकार, यस तरिकाले डकैती प्रक्रिया वा खाता usurpation यो अनावश्यक प्राणीको लागि गाह्रो हुनेछ।
प्रयोगकर्ताले उच्च स्थापना गर्न निश्चित गर्नुपर्दछ सुरक्षा स्तर पासवर्डको माध्यमबाट। यस कारणका लागि, पासवर्डको जटिलतालाई ध्यानमा राख्नु पर्छ। व्यापक रूपमा सुझाव सहित, सहित अक्षरहरू, संख्या र प्रतीकहरू उहीमा। साथै, यो कुञ्जी शब्द प्रयोग गर्न सुझाव दिइन्छ केवल प्लेटफर्ममा नेटवर्क को। यो फरक ईन्टरफेसको सन्दर्भमा जस्तै फेसबुक वा अन्य।
त्यहाँ धेरै अवसरहरू छन् जब प्रयोगकर्ताले लग इन गर्नुपर्दछ विदेशी उपकरणहरु तपाईंको सम्पत्तीमा। त्यसकारण, व्यक्ति प्रयोगको अन्त्यमा सत्र बन्द गर्न निश्चित हुनुपर्दछ। यो गर्नका लागि, अन्य व्यक्तिहरूको पहुँच तपाईंको उपकरणमा त्यो उपकरणको माध्यमबाट सीमित गर्नुहोस्। यस तरिकाले, डाटा रेकर्ड मेटाईनेछ र त्यहाँ हुनेछैन प्रवेशको सम्भावना तेस्रो पक्षहरू द्वारा। र त्यसो भए, प्रयोगकर्ताले ह्याक गरिएको इन्स्टाग्राम खाता पुन: प्राप्ति गर्नु पर्दैन।
तपाइँ जान्न पनि रुचि हुन सक्छ कसरी इंस्टाग्राम मा अधिक अनुयायीहरू.
नेटवर्क अनुयायीहरू प्राय: गर्नु पर्छ तपाइँको जानकारी प्रदान गर्नुहोस् तेस्रो पक्षहरूमा लगईन गर्नुहोस्। विभिन्न कारणका लागि, यो व्यक्तिलाई जोखिमको जोखिम हो। किनकि कसैलाई सूचनामा पहुँच दिइयो अत्यन्त व्यक्तिगत। अज्ञानतामा, के प्रश्न मा व्यक्ति पछि के गर्न सक्षम हुनेछ। त्यसकारण, यो सुझाव कसैलाई पनि यस प्रकारको जानकारी प्रदान नगर्न सल्लाह दिइन्छ, आपतकालीन परिस्थितिहरूमा बाहेक।
प्रयोगकर्ताको खाता हुनुपर्दछ इमेल त्यो सुरक्षित छ। त्यो हो, तपाईंले जान्नुपर्दछ कि तपाईंको मेलबक्समा पहुँच सार्वजनिक छैन वा अन्य उपकरणहरूमा अनुमति छैन। अन्यथा, जोसँग ईमेलमा पहुँच छ उसले पासवर्ड परिमार्जन गर्न सक्छ र यस्तै खाता पहुँच गर्नुहोस् इन्स्टाग्राम यस तरिकाबाट बचाउनको लागि एक ह्याक गरिएको इन्स्टाग्राम खाता पुन: प्राप्ति गर्नु हो।
कसरी ह्याक गरिएको इन्स्टाग्राम खाता पुन: प्राप्ति गर्ने?
ह्याक गरिएको इन्स्टाग्राम खातालाई पुनःप्राप्ति गर्ने प्रक्रिया हो तुलनात्मक रूपमा छोटो, धेरै छिटो छैन। यो गर्नका लागि प्रयोगकर्ताले इन्स्टाग्राम प्लेटफर्मको समर्थनका लागि समर्थन अनुरोध गर्न रोज्नु पर्छ। पछि अनुपालन गर्न तोकिएको निर्देशन र तपाइँको सम्बन्धित खातामा पुन: पहुँच गर्न सक्षम हुनुहोस्। प्रक्षेपको चरणले प्रयोगकर्ताको पहिचान प्रमाणित गर्ने छोटो चरणहरू समावेश गर्दछ।
यदि प्रयोगकर्ताले प्रयास गरेको छ भने तपाईको पासवर्ड रिसेट गर्नुहोस् र तपाईं सफलतापूर्वक समाप्त गर्न सक्षम हुनुभएको छैन तपाईं मद्दत केन्द्र मा जानु पर्छ। इन्स्टाग्राम प्लेटफर्मको अत्यधिक कार्यात्मक सहायता केन्द्र छ जुन परिस्थितिलाई सुल्झाउन उचित कदम चाल्छ। यो गर्नका लागि, व्यक्तिले एक ईमेल पठाउने छनौट गर्नुपर्नेछ मद्दत डेस्क दुर्भाग्यपूर्ण स्थितिको बखत गर्दै।
यो केन्द्र m लाई प्रतिक्रिया दिन जरुरी छपठाइयो दिन को समयमा मा भने Mensaje उत्तर सिरियल फेला पर्नु पर्दछ वा अंकको श्रृंखलानिर्देशनहरूको सूचीको साथ। कुन, यदि प्रयोगकर्ताहरूले इन्स्टाग्राम खाता पुन: प्राप्ति गर्न चाहेमा प्रयोगकर्ताले अनुसरण गर्नै पर्छ ह्याक गरियो
प्राप्त गरिएको सन्देशले ह्याक गरेको इन्स्टाग्राम खाता पुन: प्राप्ति गर्नको लागि कर्तव्य वा निर्देशनहरूको सूची ल्याउनु पर्छ। त्यसकारण, व्यक्तिले ईमेलको साथ उत्तर दिनै पर्छ फोटोग्राफी तपाईको यसमा प्राप्त कोड सहितको कागज छ। कोड पछि मात्र, प्रयोगकर्ताको पूरा नाम राख्नुपर्दछ, तिनीहरूको उपनामको साथ। यो छवि हुनु पर्छ क्यालिडाड excelente र जवाफ सन्देशमा संलग्न हुन, यो एक ढाँचा भएको jpg
फोटो पठाए पछि, इन्टरफेस प्रयोगकर्ताको प्रोफाइल को एक संग यो मिल्नु पर्छ। पछि पहिचान पुष्टि गर्नुहोस् खाता मालिकबाट, एक ईमेल प्रमाणीकरण को सफलता को सूचक पठाइनेछ।
अन्तिम चरण समावेश गर्नुपर्दछ लगआउट सबै ज्ञात उपकरणहरूमा। पछि सन्देशमा समावेश लिंकमा क्लिक गर्न। एक पटक, लिंकमा क्लिक गरिसकेपछि, प्रयोगकर्तालाई प्रविष्ट गर्नका लागि पुन: निर्देशित गरिनेछ नयाँ पासवर्ड तपाईंको अन्तिम प्रविष्टिको लागि।
कसरी इंस्टाग्राम 2019 को साथ पैसा कमाउने